မိန်းကလေးများသတိထားကြဖို့။ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ. – Myanmar Magazine
December 17, 2018 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်.
ကောင်မလေးကကျောင်းသူတစ်ဦးပါ နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. .နောက်တော့ ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသား ဘန်ကောက်ကို အလည်ရောက်လာပါတယ် ..အတူသွားအတူအတူတူနေပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့ အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်
မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ် လို့ ပြောတော့ကောင်မလေးက နင်ငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင် အခုချက်ချင်းရဲ ကိုကြောင်းကြားပြီး ငါ့ကိုမတရားစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်မယ်ပြောတော့ အဲ့ ဒီနိ်ုင်ငံခြားသားလဲ ကြောက်လို့ နှူတ်ပိတ်တဲ့ အနေနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..
← ဇာတ်ရုပ်ကာရိုက်တာအတွက် နှစ်ရှည်လပေါင်းများစွာထားခဲ့တဲ့ ဆံပင်တွေကို ရိတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကျော်သူ
ပရဟိတမင်းသား ဝေဠုကျော်ရဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ချိုပြုံးနဲ့ မို့မို့မြင့်အောင်တို့ရဲ့ အမြင် →